IEM an-dRajoelina : Natao ho an’olom-bitsy fa tsy ho an’ny vahoaka -
AccueilSongandinaIEM an-dRajoelina : Natao ho an’olom-bitsy fa tsy ho an’ny vahoaka
IEM an-dRajoelina : Natao ho an’olom-bitsy fa tsy ho an’ny vahoaka
Mbola manjaka ny fitiavan-tena eo amin’ny filohan’ny Tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina sy ireo akaiky azy. Fantatra mantsy ankehitriny, araka ny fanadihadiana natao, fa tsy misy mahalala sy mahafantatra ny fisian’ilay tetikasa nambara tamin’ny fahitalavitra « Initiative Emergence Madagascar » na IEM ny vahoaka.
Raha ny tao Manakara manokana, dia renivohitry ny Faritra Vatovavy Fitovinany, tsy misy na dia iray tamin’ireo mponina ao an-toerana no mahalala ilay IEM nezahin’i Andry Rajoelina nampahafantarina sy novoizina tao Antananarivo. « Tsy misy fantatray ny mahakasika izany IEM izany. Fa milaza inona na midika inona izany, sy ny fisiany. Ny asa vita ihany no tokony hitsarana izay mitantana ny firenena, ary tsy tokony ho fahanan-dalitra sy rebirebena amina zavatra tsy misy ny vahoaka », hoy Elanirina Michelline Louisette, mponin’i Manakara.
Ankoatra izay, dia maro tamin’ireo mponina izay nanontaniana no milaza fa tsy nisy zava-bitan’ny Filohan’ny Tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina, ho an’i Manakara sy ny Faritra Vatovavy Fitovinany nandritra ny fitantanany. Noho izany, tsy manaiky ny mbola hitondran-dRajoelina ny firenena izy ireo. « Ekena fa lafo ny vidim-piainana ankehitriny, saingy tsy mety aminay intsony kosa ny mbola hiverenan’i Andry Rajoelina hitantana indray ny firenena. Inona moa no mba zava-bitany taty Manakara sy tamin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany. Ny tetezan’i Manakara Be izao efa tamin’ny taona 2012, tamin’ny nitantanany ny firenena no efa tapaka. Tsy nahavita nanarina izany ho an’ny mponin’i Manakara sy ny Malagasy izay mitsidika an’i Manakara akory ny tenany. Ny Fitondrana ankehitriny izao no manamboatra io tetezan’i Manakara Be io amin’izao fotoana izao. Izany no tadiavinay mponina eto Manakara ny mba hijerena anay manokana toa ireo faritra hafa. Noho izany, manolotra fisaorana manokana ny Fitondram-panjakana ankehitriny izahay noho ny ezaka ataon’izy ireo amin’i Manakara », hoy i Charles Anthony, mpivarotra ao an-toerana.
Noho izany indrindra, dia natao ho an’iza izany ilay IEM novoizina sy nezahina nampahafantarin’i Andry Rajoelina iny. Natao ho an’olom-bitsy sy akaiky ity Filohan’ny Tetezamita teo aloha ity, izay mbola mikendry ny haka fahefana indray. Efa tonga saina ny vahoaka ankehitriny, ary tsy ho voarebireby amin’izay tetikasa mifono fitaka izy ireo.
Ny mikasika ny famatsiam-bola no nitondran’ ny filoham-pirenena fanazavana ao anatin’ny fotoam-bita voalohany izay nanazavany ny raharaha eto amin’ny firenena. Maro ireo fampiasam-bola izay efa mandeha amin’izao fotoana izao hoy ny filoham-pirenena toy ny fiarahana ...Tohiny